လမ်းကြုံရင် ပြောပေးကြပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » လမ်းကြုံရင် ပြောပေးကြပါ…
Posted by lone on Oct 18, 2011 in Business & Economics, Jobs & Careers | 17 comments
ကိုယ်ချင်းစာပြီး ညှာတာပါ စည်းကမ်းလိုက်နာ ဘေးကင်းကွာ
ပါရီမီ လိုင်းကားများအားလုံး ကို သူ့အချိန်နဲ့သူ တစ်စီးကို ဘယ်နှမိနစ်ဆိုပြီး…
သတ်မှတ်ထွက်ခွာဖို့ စည်းကမ်းတင်းကျပ်သင့်ပါသည်။ အခုဆိုရင် လူပါတဲ့ကားက
မြန်မြန်မောင်းပြီး…လူမပါတဲ့ကားက တစ်မှတ်တိုင်မှာ အကြာကြီးရပ်လေ့ရှိပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ဘာမှန်းမသိ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး fight ကြသေးသည်။ လိုင်းကားတွေ
ကိုစည်းကမ်းတင်းကျပ်ပေးဖို့ ပါရမီ လိုင်းကားက လူကြီးများ ဆောင်ရွက်ပေးကြ
ပါ။ အဲဒါမှခရီးသည်တွေလည်း သွားရလာရလွယ်ကူ ပြီး အချိန်တိကျ ရောက်နိုင်ပါ
လိမ့်မည်။ တစ်မှတ်တိုင်ကို ရပ်သင့်တဲ့မိနစ်ထက်ပိုမရပ်ပဲ မောင်းစေချင်သည်။ လမ်းတွေမှာစောင့်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ စာရင်းမှတ်တဲ့ လိုင်းကားလူကြီး များကလည်း
သူတို့ကို ၂၀၀ လောက်ပေးလိုက်ရင်ကျေနပ်နေကြပြီး…လိုင်းကားတွေမောင်း
ချင်တဲ့အတိုင်းမောင်းနေတာကို ခွင့်ပြုထားသည်။ ဂျာနယ်တစ်စောင် ထဲမှာလည်း
ကားကျပ်လွန်းသောကြောင့် အဖွားအို တစ်ဦးမူးလဲတာကို ဖတ်လိုက်ရသေးသည်။
အဲဒါဟာ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး အချိန်ကန့်သတ်ချက်နဲ့ မထွက်တာကြောင့်မဖြစ်သင့်တာ
တွေဖြစ်ကုန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့် ပါရမီမှ တာဝန်ရှိသူများကို လိုင်းကားများကို
စည်းကမ်းတကျ အချိန်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ထားသင့်ကြောင်း…မလိုက်နာလျှင် အပြစ်
ပါရမီ ကားတွေကြောင်း ပြောရရင်တော့ ကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး..တော်တော်လည်း
စိတ်တိုဖို့ကောင်းတယ်။ အထူးကားတွေလုပ်နေပြီး…အရှက်မရှိနဲ့ ဗဒ္ဓူလရဲ့
ပါရမီဆိုပြီး အသံကောင်းဟစ်ပြီး သီချင်းတွေ ဖွင့်နေသေးတယ်… တစ်ချို့ကားတွေဆို
အလုံပိတ်နဲ့… ကားစီးချင်စိတ်ပါပျောက်တယ်… လမ်းကြုံရင် ပါရမီ လူကြီးတွေပါ မက
အခြားအခြားသော ယာဉ်လိုင်းများကိုလည်း စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ သတ်မှတ်တဲ့အချိန် နဲ့
ထွက်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ ကားသမားများအား အလွန်စိတ်တို
ကိုကြောင်ကြီးမပြောခင် ဦးအောင် ပြောထားမှ … လွှတ်တော်အမတ်ဆီမှာ သွားတိုင်ဟေ့
ပါရမီယာဉ်လိုင်းတင်မဟုတ်ပဲ … မထသ ယာဉ်လိုင်းတွေပါ … မောင်းချင်သလိုမောင်းနေတာ….. မျက်စိရှေ့မြင်နေတာကတော့ .. မနက်ပိုင်းဆိုလျှင် လိုင်းကားနဲ့ လူနဲ့မမျှတဲ့ ပြသနာ .. မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး .. မြို့ပြင်နေ လူတန်းစားတွေ မြို့ထဲလာ အလုပ်လုပ်ဖို့ .. လိုင်းကားက ငါးပိအိုးထက်ပိုကြပ်တယ် … ငါးပိသိပ် ၊ ငါးချဉ်သိပ် .. သိပ်ထည့်ထားတာ … ။
ညနေဘက်ဆိုလည်း မြို့ထဲကနေ အိမ်ပြန်ကြတဲ့ မြို့ပြင်ထွက်တဲ့ လိုင်းကားဆိုလျှင် … ခြေတစ်နေရာချဖို့ အရေး စုတ်ပြတ်နေအောင်တိုးရတာ .. ပြောတော့ ခုံပြည့်သာ တင်သည်တဲ့ .. အလကားပဲ … ။
လူပြည့်တင်ပြီးတာတောင် ကိုယ်ချင်းမစာမနာ … မှတ်တိုင်တိုင်း ရပ်လျှင် အကြာကြီးပဲ … ။ အမြင်နဲ့ တင် မူးနောက်လောက်တယ် … ။ အဲ့ဒီအချိန်တွေ ကားစီးရမယ်ဆိုလျှင် မစီးတော့ဘူး… ကားပဲ ငှားလိုက်တော့တယ် … ။ လမ်းမှာတင် လူကြပ်တာနဲ့အသက်ထွက်သွားနိုင်တယ် .. ။
လွှတ်တော် အမတ်ကိုဘယ်လိုသွားတိုင်ရမှာတုန်း မမetone ရဲ့ သူကဘယ်မှာနေမှန်းမှမသိတာ
သူ့ဆီသွားတိုင်ရင်ပိုက်ဆံကုန်တယ်…သူကြီးဆီမှာတိုင်ရင် ပွိုင့်တောင်ရသေးတယ်…. ဟဲဟဲ…
ညီမလေးလုံးရေ … အစ်မလည်း ဘယ်လိုတိုင်ရမှန်း မသိပါဘူးကွယ်
ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ လက်သုံးစကားကို ကော်ပီလုပ်မိတာ … အခုတော့ အရှက်ကွဲပါပြီ
ဒီပို့ စ်ကို ကိုထူးဆန်းရဲ့ “၀န်ကြီးချူပ် နှင့် ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန် သို့” ဆိုတာနဲ့ ပေါင်းပြီး
အဘတို့ တော့.ရန်ကုန်က လိုင်းကားတွေကြပ်လွန်းလို့ .ရွာက နွားလှည်းကြီးပဲ လွမ်းနေမိတယ်ကွယ်
ကိုသိန်းစိန်က အခုလောလောဆယ် ရန်ကုန်မှာမရှိသေးဘူး… မန်ယူ ကရွန်နီကို အားကျလို့ ဆံပင်သွားစိုက်နေတယ် ထင်တယ်… ရန်ကုန်က သိပ်ပြီးမတိုးတက်လာသေးဘူး….
လိုင်းကားတွေက ဘာလိုင်းကားဖြစ်ဖြစ် အဆင်မပြေတာများပါတယ်
အန္တရယ်များ၊ လိုအပ်တာထက် လူပင်ပန်း၊ အချိန်ပိုကုန်တယ်
ဒီကြားထဲ နှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ မသာတွေကလည်းရှိသေး :mad:
လုံးလေး လွှတ်တော်အမတ်ဆီတိုင်ဖို့မသိရင် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာပဲ
ကျေနပ်မှုမရှိက တိုင်ကြားရန်ဖုန်း ဆိုပြီးရေးထားတာတွေရှိသားပဲ
ဖုန်းဆက်ပြီး အကြံပြုတိုင်ကြည့်ပေ့ါ (ယာဉ်ဝန်ထမ်းမကောင်းရင်မကောင်းတာ၊ ယာဉ်ကလိုအပ်ချက်ရှိနေရင် လိုအပ်တာမျိုးပေ့ါ)
အစ်မ ပြောသလို lone ရဲ့ ဖေဖေ တစ်ခါတိုင်လိုက်လို့ ယာဉ်မောင်းကော၊ စပယ်ယာကော အလုပ်ထုတ်ခံရဖူး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေ့ ကိုသူတို့က ချောင်းရိုက်ဖို့တောင်ကြံနေတာတွေ့
ဒီမှာတော့ တိုင်ရင်တောရင် ကိုယ့်ပြန်ရန်ရှာမှာကြောက်နေရပါလား
အခုတော့ ကားအသစ်ကြီးတွေလာပြီလို့ သတင်းစာထဲမှာတော့ထည့်ထည့်ရေးတာပဲ
အဲဒီကားကြီးတွေ လမ်းပေါ်မှာတော့ ခုချိန်ထိ မတွေရသေးတာရယ်
ကြီးကျယ်လို့ သူများကြားရင် အထင်ကြီးစရာ
အတွင်းမှာတော့ ဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေတာ တို့မြန်မာပြည်ရဲ စတိုင် တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း။
၃၉ ဗိုက်ပူကြီး တွေ ပြန်ပို့ ပေးဖို့ပြောပေးချင်တယ်
ဒါနဲ လွတ်တော် အမတ်တွေက IQ ၅ဝ ပဲ၇ှိတာဆို ဒီကိစ္စ ဖြေ၇ှင်နိုင်ပါ့မလား…
လိုင်းကား….လိုင်းကား…. ကြားရတာနဲ့တင် ခေါင်းမူး လာတယ် …
တက္ကဆီ အမြဲ ငှါး မစီးနိုင်တော့ ငပ်ိသိပ် ငချဉ်သိပ် တင်တဲ့ လိုင်းကား ကိုပဲ
အားကိုးနေရတယ်… ပြည်သူတွေ သွားရလွယ်ကူသက်သာအောင် သူတို့
အဲဒီတနေ့ ကြောင်လေးတို့ ရှိမှရှိပါဦးမလား။
လမ်းကြုံရင်တော့ ပြောလိုက်ပါ့မယ်..။ ခုတော့ လမ်းမကြုံသေးလို့နော်
လုံးလေးရယ် လိုင်းကားတွေ မစီးပါနဲ့လားကွယ်၊ ဦးကြောင်စိတ်မချဘူး။ အန်ကယ်ကလည်း ဘာလို့ လုံးလေးကို အပြင်ပေးထွက်ရတာလဲ။ ဒါနဲ့ ပုံထဲက ဘဲကြီးက လုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ပဲ၊ ဝတ်ထားတာ ကြည့်ပါလား။ လုံးကအဖြူဆို သူကအမဲ။ ဦးကြောင်ဆိုရင် လုံးဖြစ်ချင်တာထက် ပိုဖြစ်စေရမယ်။ လုံးကဖြူလို့ လိုက်မဖြူနိုင်ရင်တောင် ငွေရောင်၊ မဲလို့ အတူမမဲနိုင်ရင်တောင် မဟူရာ ဖြစ်စေရမယ်…။ ဒီတော့ စဉ်းစားပါ……..